Inkqubo yeNdoda esezantsi yeShishini (A10005) | I-Singapore ephezulu ye-Mini GPS Tracker ye-Autism / Autistic yaBantwana kunye neDementia yabantu abadala
Umzi mveliso wezemigodi yenye yezona mveliso zinobungozi emhlabeni. Apho umlinganiselo wokufa wabasebenzi kunye nabasebenzi uphezulu. Iinkcukacha manani zikarhulumente waseTshayina zibonisa ukuba bangama-5000 abasebenzi basezimayini baseTshayina abasweleka kwiingozi ngonyaka. Izehlo zemigodi ziyaqhubeka kwihlabathi liphela, kubandakanya neengozi ezibangela inqwaba yokufa kwabantu ngexesha elinje ngentlekele yase-Ulyanovsk ngo-2007 eRashiya. Ezi nkcukacha-manani zifutshane zibonisa ukuba ukhuseleko kudala luyinto exhalabisayo kwicandelo lezemigodi. Umntu ubandezeleka kakhulu kumhlaba ongaphantsi (imigodi yangaphantsi komhlaba) kunokwembiwa komhlaba. Umsebenzi womntu ngamnye ujongene neengozi ezininzi ngelixa esebenza njengothuli lwamalahle olubangela ukuba babe nengxaki xa bephefumla, izifo zemiphunga, amanxeba kwizicwili zemiphunga, ezinokubangela imiba yokuphefumla eqhubekayo. kwaye ibangela iingxaki ezininzi zempilo, ezinye iingozi abajongana nazo ezinje ngengxolo yoomatshini, ukuveza okuchaphazela amandla abo okuva, ukugqithisa kakhulu kwingxolo egqithileyo kunokubangela i-tinnitus (ukukhala ezindlebeni), ukuphazamiseka kokulala, iingxaki zoxinaniso ngamanye amaxesha ukulahleka kwendlebe okusisigxina kunye neekhemikhali. iigesi, ubushushu bomhlaba, ukuhamba kweoksijini okulinganiselweyo. Enye ingozi enkulu kukungcangcazela komzimba wonke (wbv) yingozi ebonakalayo yokwenza ingozi ebonakalayo kubasebenzi bezemigodi abasebenza ngoomatshini abakhulu. Umngcipheko wokuvezwa kakhulu yimitha yelanga kwimitha yelanga kubalulekile. Ukuvezwa kakhulu kwi-UV kunokubangela umhlaza wolusu.
Isisombululo kumzi mveliso weoyile kunye negesi kukusebenzisa izixhobo zangoku ezinje nge-ihelp-man down system eyeyona incinci kwinkqubo yokulandela umkhondo we-GPS. Umsebenzi osebenza yedwa angacinezela iqhosha xa evakalelwa nayiphi na ingozi okanye umyalezo ozenzekelayo uza kuthunyelwa kunye nendawo xa ewa ngenxa nayiphi na imeko. Amanye amanyathelo anokusebenzisa izixhobo zokhuselo ezinje ngeemaski, iiglavu zezandla kunye nezinye izixhobo ukuqinisekisa ukhuseleko lomzimba.
Icandelo lokwakha liphakathi kwemizi-mveliso ekhula ngokukhawuleza ngenxa yokunyuka kwenani labemi kunye nokufudukela kwabantu ezidolophini kwihlabathi liphela. Icandelo lezokwakha libandakanya ukwakhiwa kwezakhiwo, iindlela, izindlu, izibhedlele, iindawo zokusebenzela, iivenkile ezinkulu, njl. Kodwa iingozi zodwa umsebenzi ojongana nazo xa esebenza ukuphakama, ingxolo evela kwizixhobo, umatshini onzima uphezulu kuneminye imisebenzi yokwakha. Ubungozi obukhulu kunye nobuphambili bomntu ojamelene naye kwiziza zezi, ukuwa kunye nokutyibilika, ukubanjwa phakathi kwezinto, ukuwa phezulu kwento, indawo engazinzanga yokusebenza, ukutyibilika okanye ukuwa kwileli yezitepsi, ukothuka ngombane, ukwenzakala entloko, ukuwa koomatshini abakhulu ezi crane, ngelixa zilayisha kunye nokothula umatshini onzima ukusuka kwenye into ukuya kwenye, uqeqesho olungalunganga kunye nolawulo. ngamanye amaxesha abasebenzi abasebenza bodwa kwimimandla ekude ngenxa yoko kungabikho kunxibelelwano olusebenzayo abakwazi ukunxibelelana neqela labo.
Ukunciphisa oku kulawulwa kweengozi kufuneka kudibanise ukhuseleko njengenxalenye yocwangciso, okokuqala kufuneka babonelele ngoqeqesho olufanelekileyo kunye noqeqesho kumphathi nakubaphathi emva koko baya kukhokela abasebenzi babo ababodwa abasebenza kwiindawo ezikude ngaphandle koncedo oluvela kwinqanaba eliphezulu labaphathi. Kuya kufuneka bangenise inkqubo yokhuselo lokuwa kunye nokhuseleko lwentloko ukunciphisa ukusweleka okunzima nokwenzakala ngexesha lomsebenzi. Ukulawulwa kwabasebenzi bodwa kufuneka ubabonelele ngoqeqesho lokhuseleko kwaye ubabonise idemo yokusebenzisa izixhobo ezifanelekileyo noomatshini. Umphathi okanye umphathi kufuneka enze uvavanyo lwesiza phambi kokuqala komsebenzi. Ukuhlolwa kokhuseleko oluchanekileyo kunye nokuhlola izixhobo kunye nezixhobo rhoqo.
Ngokungafaniyo namanye amacandelo kwicandelo lezemali kunye neleinshurensi, umlinganiso wabasebenzi bodwa uphezulu kunakwamanye amashishini. Kwicandelo lebhanki kunye neinshurensi ikakhulu, abasebenzi bodwa ngabameli bokuthengisa kunye namagosa ophuhliso loshishino. Abo basebenza ngaphandle kwebhanki bazama ukufikelela kubathengi ngeenjongo ezahlukeneyo. Njengomntu oya kuqokelela imali mboleko okanye isixa seinshurensi, kuba bephethe imali eninzi kunamathuba okuba abantu abambalwa abanokukwenzakalisa abasebenzi abanokuthi babize ilahleko yemali kwaye isisisongelo kubasebenzi abodwa. Abasebenzi bodwa kwicandelo lezemali kunye ne-inshurensi banokuphathwa sisifo esibuhlungu, iingxaki zokuphelelwa ngamanzi emzimbeni kwimozulu eshushu.
Inkonzo apho abasebenzi baphangela khona kukukhuphela abantu inkunkuma kwaye bathathe inkunkuma bayokuphinda bayisebenzise okanye bayilahle. Umsebenzi womntu ococekileyo ukujonga inkqubo yokukhupha amanzi kunye nokususa zonke iibhloksi, ukunqumla amabele okanye umonakalo. Umsebenzi osebenza yedwa unokujamelana neengozi ezifana nokuvezwa kweegesi eziyingozi; Imethane, iHydrogen sulfide. Abasebenzi bodwa abachaphazeleka kusulelo oluninzi ngelixa besebenza njenge-hepatitis, iingxaki zolusu. Ukusikeka, ukukrwela, amanxeba okungena ziingozi eziqhelekileyo abajamelana nazo ngokumasikizi. Ingozi yabasebenzi iyodwa iyanda xa besebenza phantsi komhlaba kwimibhobho eyahlukeneyo, bajongene neengxaki ezinje ngokuphefumla, i-hydrogen, ukungabikho kokukhanya, izixhobo ezinqongopheleyo. Ezona ngozi ziphambili kukuba bayonzakala kwizinambuzane ezahlukeneyo ngexesha lomsebenzi. Abahlambi izandla ngokufanelekileyo emva kokwenza umsebenzi wabo ngenxa yokuswela ulwazi kunye nolwazi
Kweli nqaku sithetha ngokufutshane ngamacandelo aphambili achatshazelwayo yimicimbi yabasebenzi bodwa, ke ngoko, sicebise ngesisombululo secandelo ngalinye. Ngokufezekisa ezi zisombululo zingasentla nokudibanisa ezi zisombululo njengenxalenye yocwangciso, ulawulo lunokuzinciphisa ezi ngozi kwaye lonyuse intsebenzo kunye nemveliso yabasebenzi ababodwa. Impumelelo yombutho ixhomekeke ngokupheleleyo ekusebenzeni kwabasebenzi ngakumbi abasebenzi bodwa; ukuba umbutho uququzelele abasebenzi babo bodwa banokufikelela kwiithagethi zabo kunye neenjongo zabo.
3647 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-2 Namhlanje
Isikhokelo kwiiSisombululo soMsebenzi iLone liShishini (A10005)
Uyiphumeza njani ngempumelelo inkqubo yoMntu ezantsi (i-A10004)
Indlela yokuKhuthaza ukuMkelwa kweNkqubo yeMan Down Down (A10003)